အသားအရေလေး ထိန်းသိမ်းဖို့ Holika Holika ရဲ့ Pure Essence Mask Sheet လေးများ……. | CosmeticMyanmar
Home » Article » အသားအရေလေး ထိန်းသိမ်းဖို့ Holika Holika ရဲ့ Pure Essence Mask Sheet လေးများ…….
အသားအရေလေး ထိန်းသိမ်းဖို့ Holika Holika ရဲ့ Pure Essence Mask Sheet လေးများ…….
ပျိုမေတို့ရေ ဒီတစ်ခေါက်မှာ အသားအရေလေးကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ သီးစုံအမျိုးမျိုးနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Mask လေးတွေ အကြောင်း ပြောပြပေးပါမယ်နော်။ အဲဒီ Mask လေးတွေကတော့ Holika Holika အမှတ်တံဆိပ်ကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Pure Essence Mask Sheet လေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း အမျိုးအစား ၁ဝမျိုး ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ Green Tea Mask, Cucumber Mask, Lemon Mask, Damask Mask, Shea Butter Mask, Avocado Mask, Acai Berry Mask, Pearl Mask, Strawberry Mask နဲ့ Rice Mask တို့ပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီ အသေးစိတ်ကို ဆက်လေ့လာကြည့်ကြမယ်နော်။
၁။ Green Tea Pure Essence Mask
ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးတဲ့ Sheet လေးဖြစ်လို့ အသားအရေကို ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဖက်စိမ်းမှ ထုတ်ယူရရှိတဲ့ အဆီအနှစ်က အသားအရေ sensitive ဖြစ်ခြင်းကို လျော့နည်းတည်ငြိမ် စေပါတယ်။
၂။Cucumber Pure Essence Mask
သခွားသီးမှ ထုတ်ယူရရှိတဲ့ အဆီအနှစ်က အသားအရေကို ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးတဲ့ ရေဓာတ်ဖြည့် Mask တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ Lemon Pure Essence Mask
သံပုရာမှ ထုတ်ယူရရှိတဲ့ အဆီအနှစ်က အသားအရေကို ရေဓာတ်ပြည့်ဝပြီး နူးညံ့စိုပြေစေပါတယ်။
၄။ Damask Pure Essence Mask
ဒီ Mask လေးကတော့ နှင်းဆီမွှေးရဲ့ အဆီအနှစ်နဲ့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ အသားအရေကို​ ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပြီး စိုပြေဝင်းပစေပါတယ်။
၅။ Shea Butter Pure Essence Mask
ဒီ Mask လေးက Shea Butter နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး အသားအရေကို ရေဓာတ်ဖြည့်တင်း အားဖြည့်ပေးပါတယ်။
၆။ Avocado Pure Essence Mask
ထောပတ်သီး အဆီအနှစ်များနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီးတော့ အသားအရေကို အားဖြည့်ပေးပြီး တင်းရင်းလှပစေပါတယ်။ အရေးအကြောင်းဖြစ်ခြင်းကို တားဆီးကာကွယ်ပေးပါတယ်။
၇။ Acai Berry Pure Essence Mask
ဒီ Mask လေးက အသားအရေကို အားဖြည်စိုပြေစေတဲ့ Acai Berry သီးအဆီအနှစ်နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၈။ Pearl Pure Essence Mask
ပုလဲကနေ ထုတ်ယူရရှိတဲ့ အဆီအနှစ်ကြောင့် အသားအရေကို ကြည်လင်တောက်ပနေစေပါတယ်။
၉။ Strawberry Pure Essence Mask
စတော်ဘယ်ရီ အဆီအနှစ်နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး အသားအရေကို ကြည်လင်ဝင်းပစေပါတယ်။
၁ဝ။ Rice Pure Essence Mask
ဆန်မှ ထုတ်ယူရရှိတဲ့ အဆီအနှစ်ကတော့ အသားအရေကို ချောမွေ့စိုပြေစေပါတယ်။
ဒီတော့ ရနံ့အမျိုးမျိုးနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အသားအရေအတွက် အကျိုးပြုတဲ့ ဒီ Pure Essence Mask လေးတွေနဲ့ မျက်နှာလေးကို ထိန်းသိမ်းလိုက်ကြရအောင်နော်။
Image Source – https://holikaholika.ca/
3-Step Pig Nose Clear Blackhead Kit လေးနဲ့ဆားဝက်ခြံတွေဖယ်ရှားမယ်.......